အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “အဆိုပါ 25 Photoshop ကိုမှအကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတွေကို” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com ကြာသပတေးနေ့ 19 ဖေဖေါ်ဝါရီလအပေါ်များအတွက် 2015 12.02 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Adobe ကရဲ့ Photoshop ကိုအခု 25 အသက်ငြင်းခုံဖွယ်ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်၏အထွတ်အထိပ်ဖြစ်ပါတယ်. ဒါပေမဲ့, £ 8,57 / လမှာ, ဒါကြောင့်လည်းအများကြီးပိုစျေးကြီးတဲ့လူအများစုတတ်နိုင်ထက်င်, ဒါကြောင့်ဒီမှာပါ 25 များအတွက်အခြားနည်းလမ်း 25 photoshoppery ၏အနှစ်.
Pixelmator – Mac အတွက်အကောင်းဆုံး
£ 22,99 – OS X ကို
Pixelmator OS X ကိုများအတွက်အကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. ဓါတ်ပုံ: Pixelmator
Pixelmator ငြင်းခုံဖွယ်တစ်ဦးနဲ့ Mac ပေါ်မှာအကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူတောင်အကြီးဆုံးဓာတ်ပုံများကိုင်တွယ်, ယေဘုယျအားဖြင့်လိုအပ်သည်အဖြစ်အများအပြား Photoshop ကို tools တွေကို replicates, အဖြစ်ကို Photoshop file ကိုထောက်ခံမှု, နှင့်ပတ်လည်ဘာအနက်ကိုဘော်ပြနှင့်အသေးစိတ်အတွက်ဖြည့်စွက်နိုင်သည့်မြတ်သောအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေ tool ကိုရှိပါတယ်.
ရောနှောအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောနှင့်အကောင်းအဆိုးအဘို့အသေးစိတ်ခြယ်လှယ်ဖို့ဓါတ်ပုံများ၏လျင်မြန်ထိထိမိမိဖွင့်ဘို့အ Excellent က. Mac က app ကိုကြီးမြတ်စေသောတူညီသောကိရိယာများနှင့်အသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်းအများအပြားနှင့်အတူတစ်ဦးအလွန်နိုင်စွမ်း£ 7,99 အိုင်ပက် Pixelmator app ကိုပင်ရှိပါတယ်.
Paint.net - Windows အတွက်အကောင်းဆုံး
အခမဲ့ – Windows ကို
Microsoft ကစတီရွိုက်အပေါ် Paint. ဓါတ်ပုံ: Paint.net
Paint.net Microsoft ကသုတ်ဘို့အရိုးရှင်းတဲ့အစားထိုးအဖြစ်ဘဝကိုစတင်ခဲ့, ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးစုံအလွှာနှင့်ပိုပြီးအဆင့်မြင့်ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်တဲ့ tools တွေကိုအဖြစ် features အသစ်နှင့်အတူပြောင်းလဲ. ယနေ့တွင်ဒါကြောင့် Windows အတွက်အမြန်ဆုံးအခမဲ့ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာများ၏တစျခုဖွစျသညျ, အပရော်ဖက်ရှင်နယ်ခြယ်လှယ် tools တွေကိုတချို့၏င့်တိုတောင်းရပ်လိုက်တဲ့နိုင်စွမ်း feature ကိုအစုနှင့်အတူ.
အမြန်တည်းဖြတ်ဘို့ Excellent က, ကောက်ပဲသီးနှံနှင့်နေ့စဉ်ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်အများစု. လူအပေါင်းတို့၏အကောင်းဆုံး, ကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်.
Adobe က Lightroom – အမြောက်အများ-မန်နေဂျင်းဓာတ်ပုံများများအတွက်အကောင်းဆုံး
£ 99 – Windows ကို, OS X ကို
Adobe က Lightroom5တစ်ဦးကို standalone ထုတ်ကုန်အဖြစ်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီရဲ့ Creative Cloud ကြေးပေးသွင်းဝန်ဆောင်မှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ရရှိနိုင်. ဓါတ်ပုံ: Adobe က
ငြင်းခုံဖွယ်အကောင်းဆုံးအဓါတ်ပုံကိုမန်နေဂျာ, Adobe က Lightroom လုံလောက်တဲ့ tools တွေကိုရှိပါတယ်, ပင်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည်အ, သီးခြားပုံရိပ်အယ်ဒီတာဖွင့်ဖွင့်လှစ်ရန်ရှိခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်, Photoshop ရဲ့အနာရောဂါငြိမ်းစရာများနှင့်ခြယ်လှယ် tools အချို့အပါအဝင်. ဒါဟာအစအလင်းရောင်အပေါ်အခြေခံတဲ့အသုတ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏အစိုင်အခဲစုဆောင်းခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်ဆုံးမသော tools တွေကိုရှိပါတယ်, မှန်ဘီလူးနဲ့ camera မော်ဒယ်များ, အရာအများဆုံးအလုပ်အကိုင်ထိုသို့အစာရှောင်စေသည်.
Aviary ကုမ္ပဏီ Photo Editor ဟာ – မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး
အခမဲ့ – Android မှာ, iOS ကို
အိုင်ပက်ဘို့ Aviary ကုမ္ပဏီ, iPhone နဲ့ Android အတွက် ဓါတ်ပုံ: Aviary ကုမ္ပဏီ
Aviary ကုမ္ပဏီ အလွန်နိုင်စွမ်းပုံရိပ်ကိုထိတွေ့-up ကများနှင့်အရွယ်အစားပြောင်း tools တွေကိုနှင့်အတူအစိုင်အခဲပုံရိပ်အယ်ဒီတာဖြစ်ပါသည်, ယခု Adob​​e ကပိုင်ဆိုင်သော. ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ interface ကိုသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူစေသည်ရဲ့ Instagram ကိုစတိုင် filter များနှင့်အတူစွဲလမ်းအများဆုံးမိုဘိုင်းအယ်ဒီတာများထက်ဆက်ကပ်ဖို့ပိုရှိပါတယ်.
Autodesk Pixlr – ထို browser မှာအကောင်းဆုံး
အခမဲ့ – Windows ကို, OS X ကို, Android မှာ, iOS နှင့်ဝဘ်
Mac အတွက် Pixlr. ဓါတ်ပုံ: Autodesk
Pixlr အားလုံးတစ်ဦးအခမဲ့ပေါက်နီးပါးဆိုစီမံကိနျးအတှကျအစိုင်အခဲ tool ကိုအစုံနှင့်အတူဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာကုန်သွယ်မှုသည်. ဝဘ်ပလီကေးရှင်းဆုံးအပြည့်အဝ featured တစ်ခုဖြစ်ပါသည်, ၎င်း၏မိုဘိုင်းနှင့် desktop ပေါ်က apps များလည်းအစိုင်အခဲနေစဉ်. Pixlr ရဲ့အများဆုံးအဆင့်မြင့် features တွေ၏အချို့တစ်ဦးလိုအပ် $15 တစျနှစျကြေးပေးသွင်း, ဒါပေမယ့် Autodesk ၏ကျောထောက်နောက်ခံရှိပါတယ်, အကောင်းဆုံးကိုကွန်ပျူတာ-ကိုကူညီခဲ့ဒီဇိုင်း tools တွေကိုတချို့၏ချမှတ်ခြင်း.
PaintShop Pro ကို
£ 48 – Windows ကို
PaintShop Pro ကို – Photoshop ရဲ့ရေရှည်ပြိုင်ဘက်. ဓါတ်ပုံ: Corel
Photoshop ရဲ့ရေရှည်ရပ်တည်မှုပြိုင်ဘက်. PaintShop Pro ကိုပြိုင်ဘက်၏၎င်း၏ယန္တရားထက်စျေးနှုန်းချိုသာသော်လည်းအလားတူသတ်မှတ်ထားသော. ဒါဟာ Photoshop ရဲ့အများဆုံးအဆင့်မြင့် features တချို့ကိုကင်းမဲ့, နှင့်၎င်း၏အသစ်များမကြာခဏ-အခမဲ့ပြိုင်ဘက်အချို့ကိုအားဖြင့် bettered ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့တစ်ဦးနိုင်စွမ်းအယ်ဒီတာနေဆဲဖြစ်ပါသည်.
£ 79,99 – Windows ကို
serif PhotoPlus ဓါတ်ပုံ: serif
PhotoPlus OS X ကိုအဘို့အဆှဖှေဲ့ဓာတ်ပုံနေသူများကဖန်တီးသောကုမ္ပဏီထံမှ Windows အတွက်တစ်ဦးအစိုင်အခဲ All-ပတ်ပတ်လည်ပုံရိပ်အယ်ဒီတာဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာ tools တွေကိုတစ်လျောက်ပတ်သောအစုရှိပါတယ်, မှန်ဘီလူးဆုံးမသော tools တွေကိုအပါအဝင်နှင့်ဓာတ်ပုံဆရာများ၏အခြားအကြိုက်ဆုံး. အဆိုပါသာဘက်ကိုအဆင့်မြင့် tools တွေကိုအများအပြားအချို့သောအခြားအစီအစဉ်များထက် ပို. လက်စွဲကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်သည်နှင့်ထိုကြောင့်ထိုအဖြစ်အစပြုသူဖော်ရွေမဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်.
£ 79,10 – Windows ကို, OS X ကို
Photoshop Elements ကလူငယျဆုံးသောကုန်ကျစရိတ်များအတွက်အပြည့်အဝကို Photoshop ကနေအသုံးပြုတဲ့ tools တွေကိုအများစုပါဝင်သော Adob​​e ကရဲ့ cut-ဆင်းပုံရိပ်အယ်ဒီတာဖြစ်ပါသည်. ဓါတ်ပုံ: Adobe က
Photoshop ရဲ့ cut-ချဝမ်းကွဲ Element တွေကိုအခြားသူလူတိုငျးအတှကျတစ်ဦးဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာမှရှောင်ရှားရန်ကိရိယာတခုကနေအနှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးစုံတွဲကျော်သိသိသာသာတိုးတက်ခဲ့သည်. ဒါဟာသူ့ရဲ့ပိုကြီးအစ်ကိုကဲ့သို့တူညီသောကိရိယာအများအပြားရှိပါတယ်, အဆင့်မြင့်အကြောင်းအရာသိမှီအောင်နှင့်အနည်းငယ်အခြားပရော်ဖက်ရှင်နယ် tools တွေကိုအဘို့ကယ်တင်ပါ. အများဆုံးတာဝန်များကိုအဘို့အစိုင်အခဲ, အလားတူအင်္ဂါရပ်တွေနှင့်အတူအခမဲ့သို့မဟုတ်စျေးနှုန်းချိုသာ tools တွေကိုရရှိနိုင်ပါပေမဲ့.
ဝက်သစ်ချသီး4Mac အတွက်တစ်ဦး Pixelmator ပြိုင်ဘက်ဖြစ်ပါသည်. ဓါတ်ပုံ: ပျံအသား
OS X ကိုများအတွက်နောက်ထပ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပုံရိပ်အယ်ဒီတာ, acorn ကို "လူသားပုံရိပ်အယ်ဒီတာ" အဖြစ်ငွေကောက်ခံသည်. ဒါဟာခေတ်မီကိရိယာများနှင့် filter များနှင့်အတူထုပ်ပိုးရဲ့ကားနောက်ကျောကိုချွတ်လိုက်ပါတယ်, သတိပေးချက်များတက်သည်ကောက်ဖို့ကို Photoshop အသုံးပြုသူများအကျွမ်းတဝင်လွယ်ကူဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်းကြောင်းရိုးရှင်းသော user interface ကို.
အခမဲ့ – OS X ကို (beta ကိုအတွက်)
ဆှဖှေဲ့ဓာတ်ပုံ ဓါတ်ပုံ: serif
ဆှဖှေဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ဦးဘတ်ဂျက်အပေါ်ကို Photoshop ဖြစ်ရန်ကြိုးစား, ဒါပေမယ့်လှဲချ dumbed မဟုတ်. ဒါဟာအစာရှောင်င်, အဆင့်မြင့်ကိရိယာများနှင့်ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များရည်ရွယ်သည်. က tool ကိုအစုံရဲ့အစိတ်အပိုင်း 16-bit နဲ့ရုပ်သံလိုင်းနှုန်းတည်းဖြတ်ရေးအဆုံးမှအဆုံးသို့ CMYK ဖြစ်ပါသည်, RAW အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့် Inpainting လို့ခေါ်တဲ့ Photoshop ကိုအကြောင်းအရာသိမှီအောင်ကဲ့သို့သော tool ကို.
အခမဲ့ – Windows ကို, OS X နဲ့ Linux ကို
GIMP လုံးကိုအဓိက desktop ပေါ်မှာ operating systems များအတွက်ရရှိနိုင်မယ့်အပြည့်အဝပေးထားသောပုံရိပ်အယ်ဒီတာဖြစ်ပါသည်. ဓါတ်ပုံ: ဝီကီ​​ပီးဒီးယား
ကို GNU Image ကိုကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်ခြင်းအစီအစဉ် - - ထိုကံနာမကိုအမှီနေသော်လည်း GIMP Windows အတွက်ရရှိနိုင်ဆုံးနိုင်စွမ်းအခမဲ့ Open-source ကိုဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာများ၏တစျခုဖွစျသညျ, OS X နဲ့ Linux ကို. ဒါဟာအချို့အလွန်အစွမ်းထက် tools တွေကိုရှိပါတယ်, သို့သျောအခြို့ကိုအခြားသူများအဖြစ်ဖော်ရွေအသုံးပြုသူအဖြစ်မဟုတ်ပါဘူး.
£ 59,99 – OS X ကို
Apple ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓာတ်ပုံစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ကိုင်တွယ်ဆော့ဖျဝဲ, ဒါပေမဲ့ Aperture မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ထဲမှာ Apple ကိုဓာတ်ပုံများဖြင့်အစားထိုးပါလိမ့်မည်. ဓါတ်ပုံ: ပန်းသီး
Apple ရဲ့နှစ်ရှည်လများဓာတ်ပုံစည်းရုံးရေးမှူးနှင့်အယ်ဒီတာ, aperture ဓါတ်ပုံများ၏ tweaking အုပ်စုများ၏အများဆုံးအကျိုးရှိစွာနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်, နှင့်အောင်နှင့်အသေးစားချိန်ညှိသုံးသပ်. အဆိုပါ magnifying loop ပတ် tool ကိုအထူးသဖြင့်ထိရောက်သောဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်အများအပြားထက်အသုံးပွုဖို့ရိုးရှင်းတဲ့ရဲ့ iPhoto နှင့် တွဲဖက်. သုံးနိုင်တယ်.
အခမဲ့ – OS X ကို
ဓါတ်ပုံများ Aperture နှင့် iPhoto ဖို့ကိုဆက်ခံသည်, နွေဦးရာသီ၌လွှတ်ပေးရန်ကြောင့်. ဓါတ်ပုံ: ပန်းသီး
ဓါတ်ပုံများ, iPhoto နှင့် Aperture နှစ်မျိုးစလုံးအတွက် Apple ရဲ့အစားထိုးဖြစ်ပါသည်, နွေဦးရာသီ၌ရရှိနိုင်ဖြစ်လတံ့သော. တစ်ဦးက Preview အ app ကို၏ရရှိနိုင်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်, အစာရှောင်သော, ဓာတ်ပုံစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် tweaks လွယ်ကူအောင်ဖို့လုံလောက်တဲ့ tools တွေကိုနှင့်အတူ.
အခမဲ့ – Windows ကို, OS X ကို
Google ရဲ့ Picasa တည်းဖြတ်ရေး functions တွေတည်ဆောက်နဲ့ဓာတ်ပုံကိုစီမံခန့်ခွဲမှုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်. ဓါတ်ပုံ: ဝီကီ​​ပီးဒီးယား
Picasa Google ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုမန်နေဂျာနှင့်အယ်ဒီတာဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာက Google+ သို့ပလပ်ထိုးပေးရသည့်, ဒါပေမဲ့တစ်ဦးအစိုင်အခဲရိုးရှင်းတဲ့စည်းရုံးရေးမှူးဖြစ်ပြီး app ကိုတဆင့်ဒါမှမဟုတ် web ပေါ်မှာဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်. ဒါဟာဖို့လျင်မြန်စွာတေးသွားကိုဓာတ်ပုံများလုံလောက် tools တွေကိုရှိပါတယ်, အတွက်ပစ်ချအနည်းငယ်ဖန်စီ filter များနှင့်အတူ.
ACDSee Pro ကို 8
$99.99 – Windows ကို
ACDSee Pro ကို 8 ဓါတ်ပုံ: ACDSee
ACDSee က၎င်း၏နှလုံးမှာဓာတ်ပုံစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူတစ် Adob​​e က Lightroom analogue ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအစာရှောင်ခြင်းနှင့်ထိရောက်သောဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမဲ့မှန်ဘီလူး profile များကိုအပေါ်အခြေခံပြီး metadata ကိုအမျိုးအစားစီနှင့်မျှမတို့အလိုအလျှောက်ဆုံးမခြင်းကန့်သတ်ထားပါတယ်. ဒါဟာထူးဆန်းဓာတ်ပုံတိုးတက်လာဖို့လုံလောက်တဲ့ editing tools ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်အချို့ကိုဖျက်ဆီးနဲ့ Non-အဖျက်တည်းဖြတ်တဲ့ကိုးရိုးကားရားရောနှောစေနိုင်ပါတယ်.
အဆိုပါစျေးနှုန်းချိုသာ ACDSee 18 ပိုပြီးအဆင့်မြင့် features တချို့ကိုကင်းမဲ့ပေမယ့်ဓါတ်ပုံကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအဘို့အကောင်းတစ်ဦး option ကိုဖြစ်နိုင်.
ရိုးရှင်းသောပုံရိပ်ကိုကြည့်ရှုသူနောက်ကွယ်မှာ, ကို Preview အချို့သောအသုံးဝင်သောပုံရိပ်တည်းဖြတ်ခြင်း tools တွေကိုကမ်းလှမ်း.
OS X ကိုအဘို့ Apple ရဲ့ built-in ပုံရိပ်နှင့်စာရွက်စာတမ်းကြည့်ရှုသူတစ်ဦးလည်းမှောင်မိုက်မြင်းတစ်နည်းနည်းဖြစ်ပါတယ်. သူ့ရဲ့ရိုးရှင်းတဲ့မြင်ကွင်းအပြင်ပန်းဖြတ်တောက်မှုအပိုင်း၏ဿုံနိုင်စွမ်းရဲ့အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ထိရောက်သောပုံရိပ်အယ်ဒီတာဖုံးကွယ်အောက်မှာ, အရွယ်အစားကိုချုံ့နေဆဲ, reformatting နဲ့ရိုးရိုး touchups. ဒါဟာတခါမှာပုံရိပ်တွေတစည်းကိုတည်းဖြတ်မှာအထူးသဖြင့်ကောင်းလှ၏.
Microsoft ရဲ့နှစ်ရှည်လများပုံရိပ်အယ်ဒီတာဆဲရရှိနိုင်ပါသည်. ဓါတ်ပုံ: Microsoft က
Microsoft ရဲ့မူရင်းပုံအယ်ဒီတာ. ဒါဟာမကြာသေးမီနှစ်များတွင်တစ်နည်းနည်းပြောင်းလဲနေဆဲအစိုင်အခဲသည်င်, အခြေခံပညာပုံရိပ်အယ်ဒီတာ. ဒါဟာအလွန်အနည်းဆုံးလွမ်းဆွတ်မှုရဲ့မျက်နှာကို ထောက်. တစ်သွားလာရင်းတန်ဖိုးရှိင်, ရိုးရှင်းသောဖြတ်တောက်မှုအပိုင်းအဘို့နှင့်အမှန်တကယ်ကို Photoshop ကဲ့သို့အစွမ်းထက်တစ်ခုခုမလိုအပ်ပါဘူးကြောင့်အလုပ်အကိုင်အရွယ်အစားကိုချုံ့နေဆဲသို့မဟုတ်.
အခမဲ့ – ဝဘ်
ဆူမိုနပန်းသမားသုတ်ဖြောင့် browser မှာအလုပ်လုပ်တယ်. ဓါတ်ပုံ: ဆူမိုနပန်းသမားသုတ်
ထို browser မှာတစ်ဦးက Photoshop ကို facsimile, အခမဲ့ဆူမိုနပန်းသုတ်အကောင်းဆုံးအမြန်ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာဖြစ်ပါသည်. အဆင့်မြင့်ကိရိယာအတော်များများဟာ၌သာရရှိနိုင်ပါသည် $19 လိုလားတဲ့ဗားရှင်း, ဒါပေမဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ထိထိမိမိအဘို့ရုပ်တုဆင်းတု၏ဖွင့်, အရွယ်အစားကိုချုံ့နေဆဲနှင့်အလားတူအခမဲ့အယ်ဒီတာအလုပ်မ.
မည်သည့်အပို software များမပါဘဲအစာရှောင်ခြင်းနှင့်အသေးစားတည်းဖြတ်များအတွက်ထိရောက်သော. ဓါတ်ပုံ: Screengrab
PicMonkey အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်, ရိုးရှင်းသောဓာတ်ပုံ touchups ဘို့ set တစ်ဦးအစိုင်အခဲအင်္ဂါရပ်နှင့်အတူ browser ကို-based ပုံရိပ်အယ်ဒီတာ, ပုံရိပ်တွေမှစာသားကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့် frames များကိုထည့်သွင်း. Images ကိုကွန်ပျူတာတစ်လုံးသို့မဟုတ်အမျိုးမျိုးသောမိုဃ်းတိမ်ကိုန်ဆောင်မှုမှသိမ်းယူနိုင်, Dropbox နှင့် Flickr ကိုအပါအဝင်. တစ်ဦးကလစာ-များအတွက်အဆင့်မြှင့်ကြော်ငြာများဖယ်ရှားပေးနှင့်ပိုပြီးစာလုံးတွေနဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏.
"ကမ္ဘာ့အများဆုံးအဆင့်မြင့်အွန်လိုင်းပုံရိပ်အယ်ဒီတာ" အဖြစ်ငွေကောက်ခံပါကတည်းဖြတ်အများစုအမျိုးအစားများများအတွက်မြောက်မြားစွာ features တွေရှိပါတယ်. Image ကိုခြယ်လှယ် tools တွေကိုဖွင့်မယ့်ရိုးရှင်းတဲ့ကလစ်နဲ့ဆွဲ-a-slider ကိုပယ်ရှားများမှာ, အရင်ကဆိုရင်ရုန်းကန်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်အများဆုံး tools တွေကိုလမ်းညွှန်မှု၏လမ်းအနည်းငယ်သာရှိ. ပိုပြီးအင်အားကြီးဝစွာ features တွေကိုရှာဖွေနေသူများသည်တခြားနေရာကိုကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်.
ribbed, ရှိနေသော်လည်းကထူးဆန်းအမည်နှင့်ဖားလိုဂိုရဲ့, သင်တို့အဘို့အတည်းဖြတ်အများစုမမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူ-to-အသုံးပြုမှုအွန်လိုင်းပုံရိပ်အယ်ဒီတာဖြစ်ပါသည်, အရင်ကဆိုရင်သို့မဟုတ်ရိုးရှင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်များကြောင့်မြတ်သောအောင်. အနည်းငယ်အဆင့်မြင့် tools တွေကိုရရှိနိုင်ပါ, ဒါပေမဲ့ပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာထွက်ရှိပါတယ်.
အခမဲ့ – Windows ကို, OS X ကို, iPhone ကို, Android နှင့်ဝဘ်
Fotor ရဲ့တစ်ဦးနဲ့ Mac တယ်, Windows ကို, iPhone နှင့် Android မှာ app ကို. ဓါတ်ပုံ: Fotor
Fotor ပဲဖြစ်ဖြစ်မည်သည့် platform ကိုအကြောင်းမှ app သို့မဟုတ်ဝဘ် app ထဲမှာပေါ်ရရှိနိုင်မယ့်ဟာအခမဲ့ပုံရိပ်အယ်ဒီတာဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာ tools တွေကိုကောင်းတစ်ခုရွေးချယ်ရေးရှိပါတယ်, အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုလွယ်ကူ-to-အသုံးပြုမှုလျှောစကေးနှင့်အတူအသီးအသီး. batch တည်းဖြတ်တဲ့ဆုကြေးငွေသည်, ထိုစစ်ထုတ် tools တွေကိုကဲ့သို့.
အခမဲ့ – Android မှာ, iOS နှင့်ဝဘ်
BeFunky တစ် slick ဖြစ်ပါသည်, ဘရောက်ဇာကို-based ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ.
တစ်ဦးကမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူ-to-အသုံးပြုမှုပုံရိပ်အယ်ဒီတာကို iPhone နှင့် Android ပေါ်မှာဝံ Instagram ကို, ဒါပေမယ့်ပိုပြီးအနည်းငယ် tools တွေကိုနှင့်အတူ. ဝဘ်ပလီကေးရှင်းအလားတူရိုးရှင်း, နှင့်လျင်မြန်စွာသူတို့ကိုမျှဝေတော်ရှေ့မှာဓါတ်ပုံကိုစိတ်ကြိုက်အဘို့အစိုင်အခဲ.
Snapseed Google+ အတွက်ဘေးဖယ်ခံထားခဲ့ကြစေခြင်းငှါ,, ဒါပေမယ့်ပုံရိပ်အယ်ဒီတာနေဆဲပတ်လည်ပိုကောင်းသူမြားကိုတစျဦးဖွစျသညျ. ဓါတ်ပုံ: Google က
Snapseed က Google+ မှာသို့ပေါင်းစည်းခံရဖို့ဝယ်ယူခဲ့ပြီးနောက်ဘေးချိတ်ခဲ့သည့် Google ရဲ့မိုဘိုင်းပုံရိပ်အယ်ဒီတာဖြစ်ပါသည်. သို့သော်ထို app ကိုအလုပ်လုပ်နေဆဲနှင့်၎င်း၏ tools တွေကို, filter များနှင့်လွယ်ကူတဲ့အသုံးပြုမှုထိထိန်းချုပ်မှုနေဆဲပတ်လည်အကောင်းဆုံးတချို့ရှိနေပါတယ်.
photoshop ကို Touch ကို
£ 7,99 မှ£ 3.99 – Android မှာ, iOS ကို
Photoshop ကို၏ Adob​​e က၏မိုဘိုင်းဗားရှင်းတစ်နိုင်စွမ်း touchscreen ကပုံရိပ်ကိုအယ်ဒီတာဖြစ်ပါသည်. ဓါတ်ပုံ: Adobe က
Photoshop ကို Touch ကိုမိုဘိုင်းမူကွဲအာရုံစူးစိုက် Adob​​e ကရဲ့ touchscreen ကဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်နီးပါးအဖြစ်အစွမ်းထက်မဟုတ်ပါဘူးသို့မဟုတ်ယင်း၏ namesake အဖြစ်ကြွယ်ဝသော feature. ဒါဟာ photo filters နှင့်အချို့သောလျောက်ပတ်သော touchup tools တွေကိုတစ်ရွေးချယ်ရေးရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့် selling point Adob​​e ကရဲ့ Creative Cloud နှင့်အတူပေါင်းစည်းမှုသည်အကြီးမားဆုံးင်, desktop ပေါ်မှာ Photoshop ကိုအသုံးပြုသူများအတွက်အသုံးဝင်သည့်ဖြစ်ပါသည်.
Adobe ကရဲ့ပေါ့ပါးကို Photoshop Express ကိုလည်းအလွန်အခြေခံကျ tools တွေကိုနှင့်အတူအခမဲ့ရရှိနိုင်.
← Sony ကဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေလုပ်လို့3လျင်မြန်စွာပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း [VIDEO] Next Post →